Child – Page6– Healthy Life Journal
အရောင်ခွဲခြားမြင်နိုင်စွမ်း ချို့တဲ့ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး Color Blindness အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ Color Blindness ဆိုတာက အရောင်လုံးဝ မမြင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရောင်တွေကို ခွဲခြားနိုင်မှု စွမ်းရည် ကျဆင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်တွေကို...
သတိပြုဖွယ်ရာ ကလေးသူငယ် အဝလွန်ရောဂါ
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) အဝလွန်ရောဂါဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆီတွေက ပုံမှန်ရှိသင့်တာထက်ပိုများလာပြီး တဖြည်းဖြည်းဝလာတာကို ခေါ်တာပါ။ အဝလွန်ရောဂါဖြစ်/မဖြစ်ကို BMI (Body Mass Index) ဆိုတဲ့စံနှုန်းနဲ့ တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ အရပ်အမြင့်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တို့ကို အချိုးကျပြီး...
လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာ ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ . . .
၊ ကိုထက် ၊ လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာ အရေးကြီးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အပြောင်းအလဲများစွာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုက ပုံမှန်ဖြစ်ရဲ့လား၊ ပုံမှန်ထက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးနေသလားစသဖြင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် စိုးရိမ်ပူပန်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာပြောင်းလဲမှု အဆင့်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု...
အနိုင်ကျင့်ခံရလျှင် . . .
ကလေးအရွယ်နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေမှာ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အခါ အောက်ပါခံစားချက်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ – အသစ်တွေကို စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ကြည့်ရမှာကြောက်ရွံ့တယ်။ – စိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ – ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေချင်စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ – စိတ်တိုဒေါသထွက်တတ်တယ်။ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းနဲ့ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ထိခိုက်တတ်တယ်။ – ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာဆိုရင် မူးယစ်ဆေးစွဲတာ၊...
ထမင်းကြိုက်တဲ့ ကလေး ဗိုက်ပူနေလို့ . . .
မေး ။ ကျွန်မကလေးက အသက် ငါးနှစ်ပါ။ ထမင်းကို အရမ်းကြိုက်ပြီး အများကြီးစားပါတယ်။ အရမ်းတော့ မဝပေမယ့် ဗိုက်ပူနေပါတယ်။ အဲဒါ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲရှင့်။ မဝါဝါ၊ ဘုရင့်နောင်။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။...
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတို့ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင် အရောက်လှမ်းနိုင်စေရန်
Graduate – တက္ကသိုလ်စတက်တာနဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကို အာရုံစိုက်ပါ။ ဒါက ဘွဲ့ရအောင် ပညာသင်ဖို့ဆိုတာ အလေးထားဂရုပြုပါ။ Read – စာဖတ်ပါ။ သင်ခန်းစာတင်မက တက္ကသိုလ်ကိစ္စအဝ၀အတွက် အီးမေးတွေကိုစစ်ပါ၊ ကျောင်းနံရံကပ်ထားတဲ့ စာတွေကို စစ်ပါ။ Attend – ကျောင်းသားတွေအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။...
လက်-ခြေ-ပါးစပ်ရောဂါ (Hand-Foot and Mouth Disease)
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မနေ့က တူလေးရဲ့ မျက်နှာ၊ ခြေထောက်နဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာအနီဖုလေးတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် HFMD ရောဂါလို့ သတိထားမိပါတယ်။ အခုတလော ဒီ HFMD ဖြစ်တဲ့ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးလေးတွေ များတာကြောင့် မေမေတို့ ဗဟုသုတအဖြစ် သိထားရအောင်...
တစ်နှစ်နဲ့ နှစ်နှစ်ကြား ကလေးတွေကို ဘယ်လိုကျွေးသင့်သလဲ . . .
မေး ။ ကျွန်မမှာ အသက်တစ်နှစ်နဲ့ နှစ်နှစ်ကြား မြေးလေးသုံးယောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို ကျန်းမာပြီး ဉာဏ်ကောင်းစေချင်လို့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ ကျွေးသင့်ပါသလဲ။ ဒေါ်ဝင်းမော်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ကလေးအသက်...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်စိပြဿနာတွေအကြောင်းကို သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ ။ မွေးကင်းစကလေးတွေက ဘယ်လိုမွေးလာတာ လဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်စိဝေဒနာတွေကလည်း မတူညီပါဘူး။...
ကလေးကို ပိုလန်ဆေး တိုက်သင့်သလား . . .
မေး ။ ကလေးတွေကို Bee Pollen ဆေး တိုက်သင့်၊ မသင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့အယူအဆလေးကို သိပါရစေရှင့်။ မနှင်းမှုန် (Fb) ပါမောက္ခဦးစောဝင်း(ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသည်။ ဖြေ ။ ဆရာ့အမြင်ကတော့ မိဘတွေသာမက လူတိုင်းလူတိုင်းက...